Taliska ciidanka xoogga iyo AMISOM oo isku raacay howl gal si isku mid ah loogu qaado Al-Shabaab (Sawirro) – Xeernews24
Taliska ciidanka xoogga iyo AMISOM oo isku raacay howl gal si isku mid ah loogu qaado Al-Shabaab (Sawirro)
November 25 (XeerNews24)
Talisyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo AMISOM ayaa isku raacay in howl gal wada jir a oo si isku mid ah loogu qaado Al-Shabaab, kaddib kulan saddexdii maalin ee u dambeeyay uga socday magaalada Muqdisho.
Saraakiisha ugu sareysa ee Ciidamada xoogga dalka iyo Saraakiisha iyo Taliyeyaasha qeybaha ee AMISOM ayaa kulanka uga socday Xerada Xalane uga hadlay qorshayaal la xiriira howl gal aan kal joogsi laheyn oo lagu qaado Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidamada AMISOM Gen. Cusmaan Nuur Subagle oo markii uu kulanka soo dhamaaday la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la isku raacay howlgal si isku mid ah loogu qaado Al-Shabaab.
“Waxaa isku raacnay howl gal wada jir ah oo si isku mid ah dhinac walba looga qaado Al-Shabaab”ayuu yiri Generaal Subagle.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cali Baashi ayaa sheegay in ciidamada Milateriga iyo AMISOM ay u diyaar garoobeen dagaal dalka oo dhan looga saarayo Al-Shabaab.
Ma ahan markii u horeysay ee AMISOM iyo Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay ku dhawaaqaan duulaan Al-Shabaab looga saarayo gobolada dalka, iyadoo sanadkii 2014 uu fashilmay duulaan Al-Shabaab looga saarayay meelo badan, inkastoo deegaano kooban ay la wareegeen.
Al-Shabaab ayaa dhowaan dib ula wareegay deegaano ay ka baxeen Ciidamada AMISOM ee ka socday Itoobiya, sidoo kale waxay dagaal kula wareegeen saldhigyo ciidamada AMISOM ku lahaayeen Gedo iyo Shabeellaha Hoose.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/11/amisom-sna2.jpg 357 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-11-25 08:47:142016-11-25 08:47:14Taliska ciidanka xoogga iyo AMISOM oo isku raacay howl gal si isku mid ah loogu qaado Al-Shabaab (Sawirro)
Daawasho wacan Hidda Raaca Soomaalida ee DNA oo la Ogaaday Halkay ka soo je...